“Waa wax laga xishoodo inaan aragno Mane oo ku dhammaystay kaalinta afaraad ee Ballon d’Or” – Lionel Messi – Gool FM
(Barcelona) 05 Dis 2019. Lionel Messi ayaa ammaan ugu qubeeyay weeraryahanka Kooxda Liverpool ee Sadio Mane, wuxuuna tilmaamay inay tahay wax laga xishoodo inuu ku dhameystay kaalinta afaraad ee tartanka abaal-marinta Ballon d’Or oo la bixiyey horraantii isbuucaan.
Messi ayaa ku guuleystay Isniintii abaal-marinta Ballon d’Or markiisii lixaad ee xirfaddiisa ciyaareed, isagoo ka carreysiiyay xiddiga ay Mane isku kooxda yihiin ee Virgil van Dijk kaasoo galay kaalinta labaad, Cristiano Ronaldo ayaa kaalinta saddexaad galay, halka Sadio Mane uu afaraad xirtay, iyadoo Mohamed Salah uu booska shanaad ka soo muuqday.
Kabtanka Kooxda Barcelona ayaa ammaan siiyay xiddiga xulka qaranka Senegal ee Sadio Mane, waxaana uu sharraxay sababta uu ugu codeeyay laacibkaan abaal-marinta FIFA The Best bilowgii sanadka.
“Waa wax laga xishoodo inaan aragno Mane oo ku dhammaystay kaalinta afaraad” ayuu Lionel Messi u sheegay Canal+.
“Laakiin waxaan u maleynayaa inay jireen ciyaartooy badan oo wanaagsan sanadkaan, taasi waa sababta ay u adkayd in la doorto ciyaaryahan gaar ah, balse waxaan doortay Sadio Mane abaal-marinta ugu fiican ee FIFA The Best, maxaa yeelay waa ciyaaryahan aan jeclahay.
“Mane wuxuu gaaray sanad wanaagsan oo ay u ahayd Kooxda Liverpool oo dhan, taasi waa sababta aan isaga u doortay.
“Waxaan ku celinayaa, waxaa jiray ciyaartoy aad u wanaagsan sanadkaan, sidaa darteed xulashadu way adkayd.”
Weeraryahanka Kooxda Liverpool ee Sadio Mane ayaa gool dhaliyey, labo kalena caawiyey kulankii xalay ay 5-2 uga adkaadeen Everton ee Merseyside derby.